I Jaona, lay mpanao fanambarana
« Izaho Jaona, rahalahinareo sy namanareo amin’ny fahoriana ary amin’ny fanjakana sy ny faharetana ao amin’i Jesôsy, dia tao amin’ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin’Andriamanitra sy ny filazana an’i Jesôsy. » Apôk. 1:9.
Raha ny fiseho ivelany. ny fahavalon'ny fahamarinana dia naharesy, kanefa ny tanan' Andriamanitra dia niasa na dia tsy hita aza izany noho ny haizina. Navelan'Andriamanitra ny mpanompony hitoetra any amin'ny toerana izay hahafahan'i Kristy manome azy fanambarana mahafinaritra mikasika Azy izay mbola tsy reny hatrizay; any amin'ny toerana izay hahafahany mandray fahazavana sarobidy kokoa ho an'ny fiangonana. Navelany hitoetra irery izy, mba hanomanana tsara ny sofiny sy ny fony hihaino sy handray ireo fanambarana izay homena azy. Hay olona izay nandefa an'i Jaona ho sesitany dia tsy afa-miala fa tompon'antoka tamin'izany, nanjary fitaovana teo am-pelatanan'Andriamanitra anefa izy hahatontosa ny tanjony tsy manam-petra; ary ny ezaka lehibe hamono ny fahazavana no vao mainka nampitoetra tsara ny fahamarinana.
Tsy nanana tombontsoa hiaraka tamin'ireo rahalahiny Jaona, fa tsy nisy kosa olona na iray aza afaka nanaisotra taminy ny tombontsoa amin'ny fiarahana tamin'i Kristy. Fahazavana lehibe avy amin'i Kristy no niposaka teo amin'ny mpanompony. Niahy ilay mpianany natao sesitany ny Tompo, ary nanome azy fanambarana mahafinaritra mikasika Azy. Tena nanana tombotsoa lehibe tokoa ity mpianatra malala ity. Niaraka tamin'ireo mpianatra nandeha sy niresaka tamin'i Jesôsy izy, nianatra taminy ary nifaly tamin'ny teniny. Matetika no nanankina ny lohany teo an-tratran'ny Mpamonjy izy. Ary hitany tao Patmôsy ihany koa ny Tompo.
Andriamanitra sy Kristy ary ireo Mpampiantranon'ny lanitra no naman'i Jaona tao amin'ity nosy manirery ity izay nandraisany torolalana manan-danja tokoa. Tao no nanoratany ny fahitana sy ny fanambarana noraisiny avy tamin'Andriamanitra, izay manambara ny zavatra hiseho amin'ny fizarana farany amin'ny tantaran'ny tany. Rehefa tsy afaka nijoro ho vavolombelona ho an'ny fahamarinana intsony ny vavany, ny hafatra nomena azy tao Patmôsy indray no handeha eo aloha tahaka ny fanilo mirehitra. Avy amin'izany no hianaran'ny lehilahy sy vehivavy ny tanjon'Andriarnanitra, tsy ho an'ny Jiosy irery ihany, fa ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany".